Saving Scheme – Hamro Nepal Saving and Credit Cooperative
You are here: Home > Saving Scheme
बचतको सीमा : यस बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १ लाख देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । यस सम्बन्धि थप विवरण तालिकामा उल्लेख गरे अुनसार हुनेछ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १ लाख कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
कुनै पनि प्रकारका ब्यापार, ब्याबसाय तथा बित्तिय कारोबार गर्ने उदेश्यका लागि संचालित सगठित संस्थाहरु (ब्याबसायिक समुह, ब्याबसायिक प्रतिष्ठान, ब्याबसायिक फर्म, सहकारी, नीजि शैक्षिक प्रतिष्ठान लगाएत नाफा आर्जन गर्ने/नगर्ने संस्था तथा प्रतिष्ठान आदी) बाट प्राप्त बचतलाई संस्थागत बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा : यस बचतमा संघ संस्थाले न्यूनतम रु. १०००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १०००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
संस्थागत बचत खातामा न्युनतम मौज्दात तथा ब्याजको दर आपसि सहमतिमा तोक्न सकिने छ ।
संस्थागत बचत खातामा दिईने सुविधाहरु आपसि सहमतिमा निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
प्रत्येक महिनाको मसान्तभित्र मासिक रुपमा जम्मा गर्ने गरी सदस्यले बचत खाता खोलेको समयमा नै मासिक रकम तोकी ७५ महिना सम्म बचत गर्ने खातालाई ७५ महिने क्रमिक बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा : नियमित बचतमा न्युनतम मासिक रु.५००।– वा रु. ५०० ले निःषेश भाग हुने अंकको बचत सदस्यले गर्न सक्नेछन ।
बचतको अवधि : बचत सुरु गरेको महिना देखि ७५ महिना सम्म बचत गर्नुपर्ने छ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : नियमित तथा क्रमिक रुपमा ७५ औ महिना सम्मबचत गरे पछि अन्तिम किस्ता बुझाएको १ महिना पछि बचत रकम फिर्ता माग गर्न सकिनेछ
ब्याजदर : यसको ब्याजदर तथा सुबिधा अनुसुचि १.३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
बोनस जम्मा ७५ महिना पुरा भएपछि मात्र भुक्तान गरिनेछ । ४.३.६ बचत सुरु गरेको ३ बर्ष अवधि पुरा नभई रकम फिर्ता लिएमा मौज्दात रहेको बचत
बचत सुरु गरेको ३ बर्ष अवधि पुरा नभई रकम फिर्ता लिएमा मौज्दात रहेको बचत रकमको १% सेवा शुल्क बापत कट्टा गरी बाँकी साँवा फिर्ता गरिनेछ ।
खाता खोलेको मितिबाट अन्तिम किस्ता बुझाएको १ महिना पछि मात्र भुक्तान गरिनेछ ।
सुविधाहरु बचत अवधि भर १ पटक मात्र पाईनेछ ।
शेयर सदस्यले ७५ महिना भन्दा लामो अवधिको बचत गरि आफु तथा परिवारलाई आवश्यक भएको आर्थिक खाँचो टार्नलाई प्रत्येक महिनाको मसान्तभित्र मासिक रुपमा जम्मा गर्ने गरी संचालन गर्न सकिने बचत कार्यक्रमलाई उमङ्ग बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा ः यस बचत कार्यक्रममा न्युनतम मासिक रु.५००।– वा रु. ५०० ले निःषेश भाग हुने अंकको बचत सदस्यले गर्न सक्नेछन ।
बचतको अवधि ः बचत सुरु गरेको महिना देखि तोकिएको समायावधि सम्म बमोजिम बचत गर्नुपर्ने छ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था ः तोकिएको समय पुरा भएपछि बचत रकम फिर्ता माग गर्न सकिनेछ
शेयर सदस्यका नानीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भविष्यमा आईपर्न सक्ने आपतकालिन अवस्थामा क्रमिक रुपमा गरिएको बचतबाट बच्चाहरुकै नाममा रकम जम्मा गरि उनीहरुकै उज्ज्वल भविष्यलाई अझ सुन्दर तथा सुखी र खुशी बनाउन संरक्षकहरुले प्रत्येक महिनाको मसान्तभित्र मासिक रुपमा जम्मा गर्ने गरीे बाल बचत खाता संचालन गर्न सक्नेछन् ।
बचतको सीमा : यस बचत कार्यक्रममा न्युनतम मासिक रु.५००।– वा रु. ५०० ले निःषेश भाग हुने अंकको बचत सदस्यले गर्न सक्नेछन ।
बचतको अवधि : बचत सुरु गरेको महिना देखि तोकिएको समायावधि सम्म बमोजिम बचत गर्नुपर्ने छ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : तोकिएको समय पुरा भएपछि बचत रकम फिर्ता माग गर्न सकिनेछ ।
अन्य क्रमिक बचत
सदस्यले आफुलाई निश्चित अवधि पछि एकमुष्ठ रकम लिनको लागी आफ्नो इच्छा अनुसार बचत गरि तोकिएको समय पछि भुत्तानी लिने बचतलाई क्रमिक बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा : न्युनतम मासिक रु.१००।– देखि अधिकतम सदस्यले चाहे जति गर्न सक्नेछन ।
बिशेष गरि म्हिला शेयर सदस्यहरुको संवेदनशिल स्वास्थ्य अवस्था र सामाजिक अवस्थामा आर्थिक सहभागिता गराई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने उद्धेश्यले प्रत्येक महिनाको मसान्तभित्र मासिक रुपमा जम्मा गर्ने बचतलाई नारी बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा : यस्तो बचतमा न्युनतम मासिक रु.५००।– वा रु. ५०० ले निःषेश भाग हुने अंकको बचत सदस्यले गर्न सक्नेछन ।
संस्थामा आवद्ध ज्येष्ठ नागरिक सदस्यहरुले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न एकमुष्ट वा त्रमिक दैनिक वा मासिक राखेको बचतलाई ज्येष्ठ नागरिक बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा : यस बचतमा सदस्यले न्यूनतम मासिक रु. ५०० वा एकमुष्ठ रु.१०,०००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछन ।
बचतको अवधि : यस बचतको अवधि २ वर्षको हुनेछ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : बचत शुरु गरेको १ वर्ष पूरा भएपश्चात सदस्यले सम्पूर्ण रकम फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
यो बचत मासिक रुपमा न्युनतम रु. ५०० वा ५०० ले भाग जाने अंक बराबर नियमित रुपमा आजिवन मासिक रुपमा गर्ने बचत हो । त्यसपछि आजिवन मासिक रुपमा नै फिर्ता पाउने र बचतकर्ताको शेषपछि निजका हकवालालाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै जाने हुनाले यो बचत लाई आजिवन बचत भनिएको हो ।
यो बचत प्रत्येक महिना मासिक क्रमिक बचतको रुपमा जम्मा गर्दै जानुपर्ने छ ।
यो बचत १४४ महिना पुगेपछि जम्मा गर्नुपर्ने र १४५ औँ महिनादेखि हरेक महिना मासिक रुपमा नै बाचुन्जेल आफुले जम्मा गरेकै दरमा फिर्ता पाईने छ ।
बचतकर्ताको शेषपछि निजको हकवाला वा निजले सिफारीस गरेको व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न थालिनेछ ।
फिर्ता गर्ने क्रम र श्रृंखला एक पुस्ता देखि अर्को पुस्ता क्रमश ः हस्तान्तरण हुदैँ जानेछ
यो बचत कार्यक्रममा सहभागि सदस्यले ३ बर्ष पुगेपछि बन्द गर्न चाहेमा साँवा रकम पूरै फिर्ता गरिनेछ तर ३ बर्ष अगाडि बन्द गर्न चाहेमा जम्मा रकमको १% सेवा शुल्क कट्टा गरेर मात्र फिर्ता गरिनेछ ।
७५ महिना पुगेपछि सम्बन्धित बचतकर्तालाई प्रत्येक दशैँमा दशैँ खर्च बापत ६ महिनाको बचत बराबरको रकम उपलब्ध गराईनेछ । महिला र बच्चाको हकमा ७ महिना बराबरको बचत रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
१४४ महिना पुगेपछि यो कार्यक्रम बाट फिर्ता हुन चाहेमा जम्मा भएको साँवा रकममा दिएको सबै सुबिधाहरु कट्टि गरि बाँकि रहेको रकममा १२ प्रतिशतका दरले व्याज सहित फिर्ता दिईने छ ।
यो बचत कार्यक्रममा सहभागि सदस्यले ३ बर्ष पुगेपछि बचतकर्तालाई क्रमैसँग प्रत्येक बर्ष न्युनतम् ३ दिनदेखि बढिमा ७ दिनसम्मको सहकारी भ्रमण कार्यक्रममा संस्थाले निःशुल्क रुपमा सहभागि गराउनेछ ।
संस्थाका सदस्यले निश्चित अवधि तथा ब्याजदरमा एकमुष्ठ जम्मा गर्न सक्ने बचतलाई आवधिक बचत भनिनेछ ।
बचतको सीमा : आवधिक बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. ५०,०००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
बचतको अवधि : सदस्यले न्यूनतम ६ महिनादेखि माथि अवधि तय गरी खाता संचालन गर्न सक्नेछन् ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : आवधिक बचतको समय अवधि समाप्त भए पश्चात बचत रकमलाई सदस्यको सम्बन्धित साधारण बचत खातामा रकमान्तर गरि भुक्तानी गरिनेछ ।
सामाजिक उदेश्यका लागि संचालित सामाजिक संघ संस्थाहरु (सामुदायिक शैक्षिक प्रतिष्ठान, गुठी, विभिन्न उपभोक्ता समिति, महिला समुह, विद्यार्थी समुह, जेष्ठ नागरिक समुह, युवा क्बल÷समुह, अक्षय कोष आदि) बाट प्राप्त बचतलाई सामाजिक बचत भनिनेछ । )
बचतको सीमा : यस बचतमा संघसंस्थाले न्यूनतम रु. १०००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
जीवन बीमाको शुल्क भुक्तानीको लागि जम्मा गरिने बचतलाई बीमा बचत भनिनेछ संस्था स्वयंले जीवन बीमाको शुल्क भुक्तानीको लागि सहजीकरण गरिदिनेछ ।
बचतको सीमा : यस बचतमा सदस्यले जीवन बीमाको लागि आवश्यक शुल्क एकमुष्ठ वा शुल्कलाई १२ महिनाले भाग गरी हुन आउने रकम बराबरको रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
बचतको अवधि : जीवन बीमाको शुल्क तिर्ने अवधि नै यस बचतको अवधि कायम हुनेछ
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : जीवन बीमाको शुल्क भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम फिर्ता लैजान सक्नेछ ।
संस्थाको शेयर खरिद गर्नका लागि गरिने बचतलाई शेयर बचत भनिनेछ । संस्थालाई आवश्यक शेयर पूँजी निर्माणमा यस बचतको रकमलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ ।
बचतको सीमा : यस बचतमा सदस्यले न्यूनतम रु. १००।– देखि अधिकतम जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सक्नेछ ।
बचतको अवधि : संस्थालाई आवश्यक पर्ने शेयर पूँजीमा निर्भर रहनेछ ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : संस्थालाई आवश्यक पर्ने शेयर पूँजी वृद्धिको लागि खातामा रहेको रकम शेयर पूँजीमा मात्र रकमान्तर गर्न सकिनेछ ।
यस संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरु वा यस संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संघ संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी गर्ने पारिश्रमिक(तबल) बाट प्राप्त बचतलाई तलब बचत भनिनेछ । यस संस्थामा कार्य गर्ने सबै कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी यसै खाता मार्फत मात्र गरिनेछ । यस संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारीले कुनै प्रकारको पारिश्रमिक बुझ्दा यसै खाता मार्फत मात्र बुझ्नुपर्नेछ । यस संस्था बाहेक अन्य संघ संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि यस बचत कार्यक्रममा सहभागि जनाउन सक्नेछन ।
बचतको सीमा ः यस बचतमा शुन्य मौज्दातमा संचालन गर्ने सकिनेछ । साथै भुक्तानी लिदाँ यो खाताको रकमलाई साधारण बचत खातामा रकमान्तर गरेपछि लिनुपर्नेछ ।
बचतको अवधि ः सदस्यले खातामा राखेको रकम जुनसुकै बेला साधारण खातामा रकमान्तर गरि फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था ः सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम साधारण खातामा रकमान्तर गरि फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।
बचतको सीमा : यस बचत खातालाई कर्जा प्रयोजनमा आवश्यकताको आधारमा संचालन गर्ने सकिनेछ । साथै भुक्तानी लिदा यो खाताको रकमलाई साधारण बचत खातामा रकमान्तर गरेपछि लिनुपर्नेछ ।
बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकम क्रमिक बचत किस्ता पुरा गर्न वा कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनमा साधारण खातामा रकमान्तर गरि फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम साधारण खातामा रकमान्तर गरि फिर्ता लैजान सक्नेछन् । सामान्यता यो बचत कर्जाको भुक्तानी वा संचालन भई रहेको मासिक क्रमिक बचतको किस्ता पुरा गर्नका लागि मात्र गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि शेयर सदस्यलाई संस्थामा गरेको शेयर लगानीमा लाभासं वा कुनै प्रकार छुट वा रिवेट रकमको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका यो बचत योजनाको प्रयोग गर्नेछ । यस प्रकारको बचत खातामा दैनिक कारोबार हुन पाउने छैन । यस खाताको संचालन आवश्यकता तथा औचित्यताको आधारमात्र हुनेछ ।
बचतको सीमा : यस बचत खातालाई लाभासं वा कुनै प्रकार छुट वा रिवेट रकमको भुक्तनी प्रयोजनमा आवश्यकताको आधारमा संचालन गर्ने सकिनेछ । साथै भुक्तानी लिदा यो खाताको रकमलाई साधारण बचत खातामा रकमान्तर गरेपछि लिनुपर्नेछ ।
बचतको अवधि : सदस्यले खातामा राखेको रकमलाई सदस्यको आवश्यकता अनुसार साधारण खातामा रकमान्तर गरि फिर्ता लिन पाउनेछन् ।
बचत फिर्ता लिन पाउने अवस्था : सदस्यले न्यूनतम मौज्दात रु. १००।– कायम गरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार जतिसुकै रकम साधारण खातामा रकमान्तर गरि फिर्ता लैजान सक्नेछन् ।